Cameron.....: Blog Day အမှတ်တရ....
Aug 31 မှာကျရောက်မယ့် blog day အတွက် အမှတ်တရလေးရေးပေးဖို့ ကြောင်ကလေးမောင်မျိုးက တဂ်လိုက်ပါတယ်...။ ဒီလောကထဲ ကိုယ်ရောက်လာတာ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာဆို သုံးနှစ်ပြည့်ပြီ.....။ ဘယ်လောက်ပဲ သက်တမ်းရှိရှိ ခုထိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသစ်တစ်ယောက်လိုပဲမြင်နေတုန်း စီဘောက်တွေကို အပြေးဖတ်ချင်တုန်း ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက် လာဖတ်သွားသလဲ စောင့်ကြည့်နေမိတုန်း....။ ပို့စ်အသစ်တင်ပြီးတိုင်း ကော်မန့်ဘယ်နှစ်ခုရသလဲ ရင်ခုန်မိတုန်း....။ သုံးနှစ်ပြည့်အမှတ်တရအတွက် တလောကပဲစာလေးကြိုရေးထားတာ သတိရသလောက် ရေးစရာရှိတာလေး ကောက်ကောက်ရေးထားတာ....။ ခုတော့.....ဘလော့ဒေးအတွက်ရေးဖို့ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းယူပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့....။ မောင်မျိုးက ၂၀၀၇ ကတည်းကစရေးတာဆိုတော့ သူကကိုယ့်ထက်ဝါပိုရင့်တယ်....။ ရေးစရာ သိပ်ပြီးရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှိမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် အပိုင်းတစ်တွေနှစ်တွေလည်း မခွဲတော့ပါဘူး...။ တစ်ခါတည်းတစ်ကားပြီးပဲကောင်းတယ်...။ တကယ်တော့ စာရေးချင်လွန်းလို့သာ ဘလော့လောကထဲရောက်နေတာ... စာရေးတာကလွဲလို့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘာဆိုဘာမှမသိသူပါ....။ စိတ်ထဲခံစားရတဲ့ အတိုင်းရေးသည်....။ ရုပ်ရှင်စကားနဲ့ပြောရရင် ခုချိန်ထိ အကယ်ဒမီမှန်းပြီးရိုက်တဲ့ကားမရှိသေး.... အဲ ဘာဆု ညာဆုရဖို့ ပြိုင်ပွဲလည်းမ၀င်ဖူး... ဘယ်မဂ္ဂဇင်း ဘာစာအုပ်ထဲမှာမှ မရေးဖူးသေး အဲဒီလိုထည့်ဖို့ရာလည်း ကိုယ့်စာတွေက အဆင့်မမီသေး....။ အဲဒါကြောင့်....။
၂၀၀၈မှာ မောင်လေးတစ်ယောက်က ဘလော့လေးတစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့တယ်....။ မိုးငွေ့နှင့်အတူဖြစ်လာရခြင်းကို ဒီမှာရေးထားဖူးတယ်...။ ဘလော့စရေးတော့ စာရေးခပ်ကျဲကျဲပါပဲ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း သိပ်မသိဘူး....။ ဘလော့လုပ်ပေးတဲ့မောင်လေး ချိပ်ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်တွေကိုပဲ လျှောက်သွားပြီးစာဖတ်တယ်...။ ကိုကလိုစေးထူးရှိတယ် ကိုရင်ညိမ်းရှိတယ် မလေး(အိမ့်ချမ်းမြေ့)ရှိတယ်... ညခင်းရဲ့လမင်း ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်...။ ကျန်တာသိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး အိမ်အသစ်ပြန်ပြောင်းတော့ လင့်ခ်တွေကျန်ခဲ့တာ....။ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်နဲ့ အိမ်ခေါ်နာမည်ချင်းတူတဲ့ မီးမီးခေါ်နိုင်းနိုင်းစနေ ဆီကို နေ့တိုင်းရောက်ဖြစ်တယ်...။ သူတင်တဲ့ပို့စ်တိုင်း လိုက်ဖတ်တာ ဒီနေ့ထိပါပဲ....။ သူ့ရဲ့ ဗဟုသုတရစရာစာတွေ ရသတွေ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေကို ဘာသာပြန်ထားတာကြိုက်တယ်...။ ကိုယ်က ရှမ်းပြည်ကလာတော့ သူတာချီလိတ်ရောက်တုန်း တင်တဲ့ ရှမ်းအစားအစာတွေကို သိပ်သဘောကျတယ်....။ နောက်တစ်ယောက်က သက်တန့်ချို သူ့ကိုတော့အစက မိန်းကလေးပဲထင်ခဲ့တာ သူ့ကို ကိုယ်နဲ့တစ်ရုံးတည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ ညီမလေးပန်းခင်းလေး ဘလော့သွားလည်ရင်းနဲသိခဲ့တာ...။ သူ့ဘလော့ကိုဖတ်ရတာ သုတစွယ်စုံတစ်အုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေသလို့ပဲ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အထူးအဆန်းတွေအကုန်လုံးတင်ထားတယ်... ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးအကြောင်းလေးတွေကိုလဲ ဗဟုသုတရစရာရေးတတ်ပါတယ်...။
အဲဒီကနေ အသည်းကွဲကဗျာတွေချည်းရေးကြတဲ့ ညလင်းအိမ် အနှိုင်းမဲ့ နတ်ဆိုးရေးတဲ့အလွမ်းပုရပိုဒ်တို့နဲ့ အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ် အရမ်းလည်းခင်ခဲ့တယ်....။ ခုချိန်ထိလဲ ဖဘမှာ မခွဲအတူရှိနေကြဆဲ..။ စကားလုံးအားသန်တဲ့ ကိုယ့်ကိုမိုးကြီးလို့ခေါ်တတ်တဲ့ ကဗျာဆရာမိုးစက်အိမ်....။ စာတော်တော်စုံစုံရေးဖြစ်တဲ့ ကျမကြိုက်၏မကြိုက်၏တဂ်ပို့စ်ကိုတဂ်ပြီး ခုထိလာမဖတ်သွားသေးတဲ့ ဆိုင်းပရက်စ်က အဖြူရောင်နတ်သမီး ကိုလည်း ညီအစ်မအရင်းလိုခင်မင်ခဲ့တယ်....။ သူတို့ စီဘောက်မှာ ဟိုဟာရေးဒီဟာရေး စနောက်နေကျပေါ့...။ အလွမ်းစာတွေရေးတတ်တဲ့ ညီမလေးနှင်းဆီနက် ....။ ရွှေဝတ္ထုတိုဆုရထားတာ မကြာသေးတဲ့မြတ်မွန်....။ ခုနောက်ပိုင်းစာရေးကျဲနေတဲ့ ညီမသဒ္ဒါလှိုင်း။ ၀တ္ထုတိုကောင်းကောင်းလေးတွေ ကဗျာလှလှလေးတွေကို ရေးတတ်တဲ့ ကိုဏီလင်းညို.... မသိဂါင်္....။ ဟင်းကောင်းကောင်းတွေချက်တတ်တဲ့ အထူးအဆန်းပို့စ်လေးတွေ တင်တတ်တဲ့ မချော...သူတို့တွေအားလုံးနဲ့လည်းအရမ်းခင်တယ်....။
အထက်က ကဗျာ ကဗျာဆရာမတွေ စာရေးစိပ်တဲ့ အချိန်ထိတော့ မိုးငွေ့က သူတို့ဆီမှာပဲ တ၀ဲလည်လည်ရှိသေး...။ တခြား ဘလော့လည်ပြီးစာဖတ်တာ သိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျ....။ ၂၀၀၉ တစ်နှစ်လုံးဆိုပါတော့......။ ကဗျာဆိုလို့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ညီမလေး ခေါင်ခေါင်ကိုတော့ ဘယ်ထားခဲ့လို့ရပါ့မလဲ..။ သူ့ကိုလည်း ပန်းခင်းလေးဘလော့ကနေတွေ့လို့ စာသွားဖတ်ရင်း သိခဲ့တာပဲ...။ ကိုယ်စာသွားဖတ်တဲ့ အချိန် သူက ဘလော့လောကနေ ကိုယ်ယောက်ဖျောက်ခါစလေး....။ သူစာတွေဆက်မရေးရင် သူ့ကဗျာကောင်းလေးတွေ ပျောက်ကုန်မှာဆိုးလို့ သူ့ကဗျာတွေကိုခေါင်ခေါင်ရဲ့ကဗျာများ ဆိုတဲ့လေဘယ်နဲ့ သီးသန့်လုပ်ထားတယ်....။
၂၀၁၀ လောက်မှ ဘလော့အိမ်လည်ခြင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေးလုပ်လာခဲ့တယ်....။ အဲဒီမှာ မပန်ဒိုရာကိုသိလာတယ်...။ သူရေးတဲ့ Avator ရုပ်ရှင်ခံစားမှုစာလေးကိုစဖတ်ရင်းပေါ့...။ ပြီးတော့ သူ့ဘဲငန်းဇာတ်လမ်းလေးလည်း ဘလော့မှာ အင်မတန်ပွဲစည်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်အတွဲလေးပဲ....။ ရယ်စရာဟာသစာရေးဆရာ မဟုတ်ပေမယ့် စာရေးရင် ပြုံးချင်စရာအရေးအသားလေးတွေနဲ့ စွဲဆောင်တတ်တဲ့ မချစ်ကြည်အေး ...။ အက်ဆေးလှလှလေးတွေကို စီးမျောလိုက်ပါလာအောင်ရေးတတ်တဲ့ မသက်ဝေတို့ကိုခင်လာတယ်....။ ဖဘသုံးကတည်းက တော်တော်လေးရင်းနှီးသွားကြတာ......။ ဓါတ်ပုံဝါးဝါးလေးတွေကိုတင်တတ်တဲ့ စလုံးပေါင်းအမှားတွေကို ဒီအတိုင်းအမြဲတင်တတ်တဲ့ တိမ်တွေကိုချစ်တတ်တဲ့ မမခင်ဦးမေ......။ ရသကောင်းကောင်းနဲ့ တခါတလေမော်ဒန်ဆန်တဲ့ စာတွေရေးတဲ့ မနော်(မနော်ဟရီ)။ ကျနော် ကျနော်လို့အမြဲပြောတတ်တဲ့ မန်းသူ မကြီးရွှေစင်။ ဘယ်တော့မှမရိုးအီနိုင်တဲ့ သူ့စာဖတ်တိုင်းအမြဲရယ်ရတဲ့အမြဲရှင်သန်နေဆဲ ကျမတို့ရဲ့ ကိုကြီးကျောက်...။ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ အစ်ကိုတွေအစ်မတွေနဲ့ သိကျွမ်းရတာသိပ်ကောင်းတာပဲ...။ ကိုယ်မသိသေးတာက အများကြီးပဲလေ...။ ကိုယ်မသိသေးတာကို သူတို့ဆီကသိရတယ်...။ ကျောင်းသားဘ၀ထဲက သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေများတယ်...။ အိမ်မှာလည်းအကြီးဆုံးဆိုတော့ အစ်ကိုအစ်မတွေမရှိတော့ အစ်မတွေနဲ့ ခင်မင်ရတာ သိပ်ကိုဝမ်းသာတယ်....။ အထက်မှာပြောပြထားတဲ့ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ အပြင်မှာ အားလုံးလိုလို မြင်ဖူးထားတယ်...။ ဂျင်းစုတ်လေးဆိုတဲ့ အင်ကြင်းသန့်ကိုတော့ မချစ်တို့ မသက်ဝေတို့ဆီမှာ ကော်မန့်သွားပေးရင်းသိခဲ့တာ...။
ဘလော့လောကထဲက မောင်နှမတွေဆီ တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားလည်ရင်းက ခုနောက်ပိုင်းမှသိလာရတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကတော့ ထိုင်းအစားအစာတွေ သဘာဝရှုခင်းတွေ ဖက်ရှင်ရှိုးတွေ ရိုက်ကွင်းတွေကိုတင်ပေးတတ်တဲ့ မွန် အေးချမ်းတဲ့အားကျစရာ မိသားစုလေးနဲ့ စာရေးကောင်းတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်၊ ကိုယ်ကအစားမက်တော့ ဟင်းချက်တဲ့ အိမ်ရှင်မဘလော့တွေ ဆီကိုလည်း တော်တော်ရောက်ဖြစ်တယ်...။ တစ်ယောက်ချင်းမရေးပြတော့ပါဘူး.......။ မအိမ်သူ မရို့စ် မဒမ်ကိုး မိုးပန်းချီတို့ Jasmine တို့တွေကဘလော့ ညီအစ်မအသစ်တွေပေါ့...။ မိုးပန်းချီကိုတော့ ဖဘမှာကတည်းက သိတာ နာမည်လေးကို သဘောကျလို့ သူ့ဘလော့ကိုသွားလည်ဖြစ်သွားတယ်...။ ဦးဟန်ကြည် အန်တီတင့် ကိုညိမ်းနိုင် ကြယ်လွမ်းသူနဲ့ နတ်ဆိုးလေးတို့ကိုတော့ ကော်မန့်လာရေးတာတွေ့ရင်းနဲ့ သိသွားတာ....။ ဒီတော့မှ အော်.. အသင်တို့ ဘလော့လောက အတော်ကျယ်ပြန့်သကိုးလို့ သုံးသပ်မိတယ်.....။ ဒါတောင်ကိုယ်သိနေတဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က သေးသေးလေးရှိသေးတာ...။ အသစ်မောင်ငယ် ညီမငယ်တွေလည်း အားမလျှော့ပါနဲ့ ရေးကြပါလို့... အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေအများကြီးဆီကနေ ပညာရတယ် အားတွေရတယ်မဟုတ်လား...။
မောင်မျိုးပြောသလိုပဲ ဘလော့ဂါဖြစ်ရတာပျော်တယ်....။ ကိုယ်နဲ့ မမြင်ဖူးတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မိတ်ဆွေတွေလည်းတိုးပွားတယ်....။ စာရေးရတာလည်းပျော်သကိုး ဘယ်တော့မှမသေနိုင်တဲ့ပိုး....။ တကယ်တော့ ဒီတဂ်ဂိမ်းရဲ့ မူလပင်ရင်းကတော့ ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)ပါ ...။ ဘလော့လောကအကြောင်းအရာ အစအဆုံးနီးပါးကို အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီးတင်ထားတဲ့ ကိုအောင့်ဘလော့မှာ စုံစုံလင်လင်သွားဖတ်ဖြစ်ကြမှာပါ....။ သူ့ကိုတော့ မသိပါဘူး... မသက်ဝေတို့ဆီမှာတော့ ခဏခဏတွေ့ဖူးပါတယ်....။ ကိုအောင်တဂ်လို့ မောင်မျိုးရေးသည်...။ ယခုတစ်ခါ မောင်မျိုးတဂ်လို့ မိုးငွေ့ရေးသော... ဘလော့ဒေး၏အမှတ်တရပို့စ်လေးတစ်ပုဒ် ဒီမှာတင်တစ်ခန်းရပ်လိုက်ပါသည်..။ ဆက်ပြီးမတဂ်တော့ပါဘူး ချစ်သော ဘလော့မောင်နှမများ ဘလော့ဒေးအတွက် အမှတ်တရရေးတင်ဖြစ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...။
စကားချပ်။ ။ မောင်မျိုးနဲ့သိတာ သိပ်မကြာသေးဘူး....။ မိုးငွေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးသူငယ်ချင်း အသစ်စက်စက်လေး ဆိုပါတော့...။ ဖဘမှာတော့ ကြောင်ရုပ်ကလေးနဲ့ အမြဲမြင်နေကျပါ....။
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရပိုစ့်လေးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ဖတ်ခဲ့တယ်မမိုး။ ဘလော့လောကလေးထဲက ညီအမလိုချစ်ရတဲ့ မမိုးလည်း စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ။
ဘလော့ဂ်လောကကို မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရောက်ခဲ့ပေမယ့် စိတ်ချမ်းမြေ့မှု အပြည့်အဝရခဲ့တာမို့ ရတဲ့အချိန်တိုင်းကို ဒီနေရာလေးပဲ အရောက်လာမိနေတော့တယ် မိုးငွေ့ရေ။
ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ ပို့စ်လေး လာဖတ်သွားတယ်။ ကိုယ်မသိတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ နာမည်လေးတွေလည်း မှတ်သွားတယ်။
အေးလေး အသက်ကလဲ ၆ လဆိုတော့
မိုးငွေ့ ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ စာတွေအများကြီး
ကိုယ့်ထက် အသက်တစ်နှစ်ကြီးတဲ့(ဘလော့ရေးသက်ပြောတာပါ) မိုးငွေ့ရဲ့ ဘလော့ဒေး အမှတ်တရပို့စ်ကို အမှတ်တရ ဖတ်သွားပါတယ် . . .ဦးဟန်ကြည်လည်း ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) အချွန်နဲ့မထားလို့ ရေးရဦးမှာဆိုတော့ သူများရေးထားတာတွေကို လေ့လာရေးလည်း လုပ်ရင်းပေါ့လေ...ဘလော့ရွာလေးက ပျော်စရာကောင်းပါတယ်လေ...
မမိုးက ဘလော့ဂ်ရေးတာ တို့ထက်တစ်နှစ်စောတယ်
ဘလောဂ့်လောကမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတာ ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နော်။
အရင်ကတော့ တဂ်ပိုစ့်တွေ မရေးတော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ဖူးပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုခင်လို့ မင်လို့ တဂ်လာမှတော့ ရေးနိုင်အောင်ဘဲ ကြိုးစားမိတော့တယ်။
အံမယ် . . သူလဲ တယ်စွမ်းတယ်ပါလား . . . ဒီရွာထဲ ရောက်လာတာ သုံးနှစ်မပြည့်သေးဘူး ရွာရိုးကိုးပေါက်သွားတတ်နေပြီး)))))))))
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျား)
ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဖြတ်သန်းပုံချင်းကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိပ်မကွာလှဘူးနော့် ။
သူငယ်ချင်း အသစ်လေးကလည်း ခင်စရာကောင်းပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားးး
25 August 2011 at 06:50
ဟက်ပီးဘလော့ဂ်ဒေးပါ ညီမမိုး...။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဆက်လက်၍ ဘလော့ဂင်းနိူင်ပါစေကွယ်....:)
ဘလော့ဂ်ဒေးလေး လာဖတ်သွားတယ်ညီမရေ။ အရင်မအားလို့မရောက်ဖြစ်တဲ့ ကြွေးကျန်သုံးပုဒ်ပါ တလက်စတည်းဖတ်သွားတယ်။း)
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေး လာဖတ်တယ် မမ .:)
အားပါး..မမိုးငွေ့ လိုက်ဖတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ အများကြီးပါလား၊ အားလုံးလိုလို ကိုလည်း လင့်ခ်တွေ ပေးထားတော့ ဘလော့ဂ်တွေ အချင်းချင်း ပိုသိစေဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေး အထိမ်းအမှတ်လည်း မြောက်တယ်ဗျ၊ ဒီရပ်ဝန်းလေးမှာ လူသစ်၊ လူဟောင်းတွေ အများကြီး ဝင်ထွက်သွားလာနေပြီး စာကောင်းပေမွန်တွေလည်း စီးဆင်းနေကြလို့ ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်..။
အစ်မရေ....ဒီ blog day မှသည် နောင် blog day ပေါင်းများစွာကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျား... :)
ခင်တဲ့ ( ဖိုးကြယ် )
အစ်မရေ....ဒီblog day မှသည် နောင် blog day ပေါင်းများစွာကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း.... :)
မမိုးရေ....မမိုးရဲ့ဘလော့လေး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိတိုင်အောင် အခုလိုလှပစွာ ထာဝရရပ်တည်သွားနိုင်ပါစေနော်...